Sekoly FJKM: Hankalaza ny Jobily faha-200 taonany
jeudi, 06 décembre 2018 10:23
Hankalazaina mandritra ny taona 2019 ny faha-200 taonan’ny sekoly protestanta, niandohan’ny Sekoly FJKM eto Madagasikara.
Ara-tantara dia ny 8 septambra 1818 no naorin-dry David Jones, isan’ireo nitondra ny Filazantsara niaraka tamin’ny LMS (London Missionary Society), teto Madagasikara. Etsy Andohaho, Razafindrahety, ampitan’ny Katedraly Katolika no nisy azy tamin’izany. Fifandaminana dia nanemorana ny fankalazana ny Jobily faha-200 taonan’ny fanabeazana FJKM ho amin’ny 2019.
Hatao any Tsiroanomandidy amin’y 27-28 martsa 2019 ny fanokafana ny fankalazana ity Jobily faha-200 taonan’ny Sekoly FJKM ity. Fianarantsoa no hampiantrano ny ivon’ny fankalazana amin’ny septrambra 2019 ary any amin’ny volana novambra 2019 ny famaranana hatao eto Antananarivo.
Efa mijoro ny Komitin’ny Jobily, tarihin’ny Pastera Rasendrahasina Lala Haja, filohan’ny FJKM teo aloha. Hisy ny fotoam-bavaka hatao ao amin’ny FJKM Andrainarivo amin’ny alahady 9 desambra tolakandro, mandritra izay no hanolorana sy hitsofandrano ireo tomponandraikitra amin’izany.